Yakanakisa Instagram Bots Kuenzanisa 2021 - Automate Instagram
Instagram bots (IG bot) anoshandiswa kugadzirisa yako account account, Semuyenzaniso, exchanges, makomendi, kunanga mameseji, tevera, kuregererwa kwekutevera uye nevamwe.
Chinangwa ndechekuwedzera huwandu hwevateveri vako uye kugadzira vateveri chaivo, uye kwete traffic yekunyepera uye maakaunti enhema.
Instagram bots inogona kukurumidza manejimendi manejimendi yeaccount yako uye kuwedzera huwandu hwekushanya, vateveri uye kudzvanya pawebhusaiti yako.
Vhidhiyo yemaminitsi makumi maviri pazasi inotsanangura zvakadzama maitiro ekumisikidza Instagram bot kuti ikubatsire kukura yako Instagram account..
Instagram bots inogona kuita mabasa mazhinji – sekutumira mameseji ku Instagram feeds zvinoenderana nezvinangwa uye nongedzo iwe yaunopinda mu Instagram bot.
Izvi zvinoreva kuti iwe uchawedzera kuoneka kweakaundi yako nekuti iwe unozoonekwa kazhinji pane iyo Instagram feed.. Ehe saizvozvo, izvi zvinobvumidza vanhu kuwana yako zvemukati uye rako rezita, pfuura nepakati peakaundi yako uye, kana vachida zvavanoona, vanogona kukutevera.
Chengetedza Yako Akaunti Akaundi
Maakaunti e Instagram ane zvirimo zvekuita uye akakodzera otomatiki kunongedza zvichagadzira zviitiko nekudyidzana izvo zvingangoonekwa sezvisikwa uye zvinoguma nekushanyirwa chaiko.. Izvi zvingangogara pasi pe radar yechero kuongororwa ne Instagram..
Zvakapesana, Instagram account ine zvisvinu uye zvisina basa zvemukati, zvisina kusimba otomatiki kunongedza uye kumisikidza, kushamwaridzana nevanhu vanoona kuti chiitiko ichi ndechekunyepedzera kana spammy.
Wese munhu akazvionera kare, kubva kune zvisina basa maMDCs kune vateveri vasina kujairika mune dzakasiyana niches.
muna 2017, Instagram yakumbira kuvharwa kwemasevhisi akati wandei, kunyanya Instagress, asi kune dzimwe nzira.
Iwo makuru Instagram bots
Isu takavaedza vese uye mhedzisiro inoratidzwa pazasi:
Bvunzo 24 maawa zve0,99 EUR
Zvekushandisa zve sarudzo yemhando yenyaya
Yakabatanidzwa chengetedzo uye zviripo proxy zvigadziriso
Zvirongwa uye kusefa kusiyanisa kumhanya kunowanikwa
Tsvaga iyo kupihwa
Inflact (Aimbove Ingrammer)
2 vhiki kuyedzwa kwe 32 EUR
Style kushandisa michina Kufanana / Tevera / Mira Kutevera
Zvimiro zve kuchengeteka kwakazara uye proxy
Basic kumhanyisa marongero uye firita sarudzo
3 mazuva muedzo wakasununguka
Zvekushandisa zve Kufanana / tevera / hausisiri kutevera / kutaura
Sarudzo kuchengetedzwa kushoma uye hapana proxy
3 zvirongwa zvekumhanya, kufambira mberi kwepamberi uye kudzikisira
3 zuva kuedza kune 1 EUR
Kuchengetedzwa uye rubatsiro na proxy inowanikwa
Kukurumidza kugadzirisa uye kusefa kunowanikwa
Kubvunza akasununguka uye 5 mazuva muedzo wakasununguka
Kero VPN / IP yakasarudzika kuitira kuchengetedzwa
Zvirongwa zvechiitiko otomatiki kumhanya
255 € / mwedzi
Zano re Starter ndeye mahara zvachose
Zvekushandisa zve Kufanana / kutaura
Kuchengetedzwa kwepakati neiyo yakavakirwa-mukati
Speed ​​kugadzirisa yakasarudzika yekushandisa
Zvekushandisa zve Ini ndoda / tevera / handichateveri / komenda / tarisa nyaya / repost / DM
Yakabatanidzwa chengetedzo uye proxies akazvitsaurira
Speed ​​kugadzirisa inowanikwa
11.90€ / mwedzi
5 mazuva muedzo wakasununguka
Zvirongwa chete Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri iripo
29.95€ / mwedzi
Zvekushandisa zve Ini ndoda / tevera / handichatevera / tarisa nyaya
Kuchengetedzwa kwakazara ne yakavakirwa-mukati
3 speed settings nehungwaru mafirita
Zvekushandisa zve Ini ndoda / tevera / handichateveri
Aihwa kukurumidza kugadzirisa
Ndeipi nzira yekutevera kukuzivisa iwe nezve kuvapo kwevateveri venhema?
Instagram inoedza kumisa bots uchishandisa mashoma maitiro:
Chiziviso “Pusha” kukuzivisa iwe kuti vari kudzima mameseji “inauthentiques” izvo zvakaonekwa uye zvakagadzirwa neyechitatu-bato kunyorera. Ruzivo rweakaundi yako rwakamakwa sekukanganiswa nekuti iwe wakarugovana nevechitatu bato.
Instagram iri kutepfenyura ichi chiziviso kukurudzira vatengi kuti vachinje mapassword avo, chii chinokubvisa kubva kune wechitatu bato (bot Instagram)
Chimwe chiziviso chinoratidza kuti urikushandisa sevhisi iyo “inobatsira iwe kuwana shamwari nevateveri” uye bvisa account yako panguva yakatarwa.
Nezve izvo, izvi zvinowanzoitika nekuda kwekuti urikushandisa Instagram otomatiki sevhisi isina kuchengetedzeka kana kuti uno gadzira zvaunofarira kana makomendi nenzira isingatarisirwi. Iwo ma bot ataurwa atora pamusoro Instagram uye akatumira mutsvuku mutsvuku ku Instagram – saka chenjera kuti usashandise iyo IG robhoti nenzira isiri iyo.
Kana imwe yemapoinzi matatu ari pamusoro ikaitika, saka edza kusanetseka. Zvinokurudzirwa kuti umire kuyedza kuyanana kuburikidza neakaunzi yako, uye chero shandura yako Instagram bot, ronga kuronga kuchinjana kwako zvishoma nezvishoma. Iyo block inonyangarika mukati menguva inoratidzwa mune ziviso (kazhinji pavhiki) uye unogona kuenderera uchitaurirana.
Instagram haimanikidzi chero chiito kunze kwekutumira zviziviso zvitatu zviri pamusoro.
Hazvisi zvakajairika kuti account yako kubiwa kana kukanganiswa neiyo IG bot, nekuti marobhoti aya aripo chaizvo kubatsira vatengi vavo. Aya marobhoti anovimba nedziviriro yedata rako uye account yako.
Kune imwe chete nzira yekuona kuti yako Instagram account inogamuchira yepamusoro fomu yekudzivirira., uye ndiko kushandisa simba regweta paaccount yako.
Proxy inoshandura nzvimbo kubva kune iyo bot inosangana, kuitira kuti irege kuita zviito zvakawandisa kubva panzvimbo imwechete, chii chinowanzo shumwa sehunhu hwekushusha.
Yedu yatinoda proxy sevhisi yatakawana ndeye FrogProxy. Iyi ishare mbozhanhare sevhisi, izvo zvinoreva kuti kubatana kwacho kwakafanana neiyo smartphone, saka haatarise kunyumwa pa Instagram.
Tarisa iyo FrogProxy maficha pano uye ita shuwa kuti kana iwe uri kushandisa pasocial media automation, unochengetedza account yako ne proxy.
Unyengeri: Sezvo iwe uchiri kungogamuchira aya chaiwo ma ziviso iwe paunogadzirisa iyo account, zvinokurudzirwa kugara wakachengeteka uye kushandisa bot rakachengeteka kwazvo riripo.
Ndeapi mashandiro uye hunhu hwema bots e Instagram?
Isu tinoshandisa akasiyana maakaundi e Instagram – saka taifanira kuyedza gumi repamusoro kuti tione kuti ndeipi Instagram bot inoita zvakanyanya, uye ndeupi akachengeteka!
Ndeapi akanakisa Instagram bots?
Chikonzero chatinosarudza IBF pamusoro pemamwe bots ndechekuti ndiyo yechipiri yakachipa pamusika uye kwete ese mamwe maturusi aripo anopa akasiyana maficha pane ino mutengo mutengo..
Vanokurumidza zvoga zviitiko: Ehe – kune otomatiki zviitiko zvekumhanya, zvinoreva kuti unogona kuseta yako yekumhanyisa. IBF inopawo inonakidza yezvinyorwa scheduler, otomatiki emashoko akanangana uye kuongorora, izvo zvinoita iyi Instagram bot sarudzo yakanakisa nekuti ine zvakawanda maficha, iri pamusoro, nyore kushandisa uye pamusoro pezvese zvinodhura mwedzi wega.
VPN uye kugadzirisa: Gadzira yako wega VPN uchishandisa iyi bot.
Kuchengeteka: Yakabatanidzwa chengetedzo masystem uye kugona kushandisa yako wega nharembozha proxy yakakwana rugare rwepfungwa. Icho chete chinokatyamadza kune ino Instagram otomatiki sevhisi ndeyekuti hapana basa revatengi., asi izvo hazvishamise panguva ino yemutengo. Kana iwe uine otomatiki ruzivo, hazvizove dambudziko.
Zvakafanana bots: Kana iwe uchida mashandiro e Instagram's Bot Muteveri asi uchida rubatsiro kubva kune vatengi, ipapo Social kaputeni anogona kunge ari sarudzo yakanaka.
#2 – Inflact (kare Ingrammer)
Mutengo: 49 EUR pamwedzi
Zvoga zviitiko zvekumhanya: Ehe – vane maparameter akakosha ekukudzivirira. Ivo vanoratidzira yakadzama zviitiko zvekumhanya zvinoteedzera chaiko hunhu hwevanhu, nhamba uye kusefa.
VPN uye kugadzirisa: Inosanganisirwa pakagadzirwa account.
Kuchengeteka: Standard chengetedzo maficha iwe aunotarisira kubva kune otomatiki sevhisi.
Chechipiri nzvimbo: Boostgram chishandiso chakafanana chinokutendera iwe kuvandudza yako account ye instagram, kunyangwe isiri kushanda seInflact.
Zvoga zviitiko zvekumhanya: Zvoga zvimhanyisa kumisikidza zvakanaka mune izvi – neyakajairwa magadzirirwo, hauzodarika miganho yakatarwa ne Instagram.
VPN uye kugadzirisa: Kwete setup yeVPN kana rubatsiro.
Kuchengeteka: Instazoods anga aripo kwenguva yakati rebei uye anozivikanwa mumusika webasa ravo rakavimbika revatengi.. Kwemakore, ivo vakakwanisa kuchinjisa kune Instagram kugadzirisa uye shanduko, izvo zvinogona chete kuve chinhu chakanaka kune vatengi. Iwe unonyatsoda urwu rudzi rwechiitiko uye ruzivo kana iwe uri kunyatsofunga kufunga nezvekuwedzera ako akawanda Instagram maakaundi..
Ichi hachisi chakanakisa chiitiko kana mushandisi interface, asi basa revatengi rakakwana !
Zvakafanana bots: Gramista yakafanana neiyo Instazood.
Zvoga zviitiko zvekumhanya: Dzinomhanyisa sarudzo sarudzo.
VPN uye kugadzirisa: Hapana akavakirwa-mukati marongero ekumisikidza.
Kuchengeteka: Iyo yekutanga pasuru inokupa yakajairika chengetedzo, asi hapana proxy wekuzvarwa arikushaikwa mune iri bot. Iwe unogona kubhadhara maneja account kuti uchengete otomatiki yako mukati memiganhu.
Joli bot, nyore kushandisa neyakanaka kunongedza sarudzo.
Zvakafanana bots: kicksta
#5 – Zvemagariro Sensei
Mutengo: 255 EUR pamwedzi
Zvoga zviitiko zvekumhanya: Iko kune otomatiki kumhanyisa zviitiko zvekuita neichi chishandiso uye ivo vanogadzirisa nhanho dzese dzemagariro enhau otomatiki maitiro ako iwe. Izvi zvinosanganisira wongororo kuona chinonyanya kushanda zviitiko zvekumhanya izvo zvinokutadzisa kuti usaziviswe..
VPN uye kugadzirisa: Iwe unogashira yako wega VPN uye IP kero.
Kuchengeteka: Tarisira kuti ugamuchire akazvitsaurira account maneja kuti akubatsire iwe nhanho dzese dzenzira. Paunotanga mushandirapamwe, iwe uchazoda runyorwa rwema hashtag uye maakaundi aunoda kumisikidza sezvinangwa zvekushandisa uye timu yavo inobata zvimwe zvese. Mhedzisiro inowanzoenderana nemhando yezviri mukati uye marongero aunoshandisa, Zvisinei, takaona 500-1000 vatsva vanyoreri pamwedzi neSocial Sensei.
Zvakafanana bots: Upleap inopa yakazvipira account maneja kuti ikubatsire iwe kukura vateveri vako.
#6 – Mubatanidzwa
Mutengo: 18 EUR pamwedzi
Zvoga zviitiko zvekumhanya: Yakasarudzika spidhi yekumisikidza yekushandisa inodonhedza chikuva.
VPN uye kugadzirisa: : Iwe unogona kuwedzera yako proxy uchishandisa iyo yakavakirwa-mukati proxy chishandiso.
Kuchengeteka: Yakachengeteka kwazvo uye inoenderana chikuva – unogona kusarudza manyore maakaunzi aunoda kuteedzera pamberi, ipapo Combin ichaita zvikumbiro ne Instagram, kukupa uzere kutonga.
Zvakafanana bots: Iyi bot inosarudzika mukushanda kwayo – hapana mumwe anoshandisa sarudzo yemanyore kune mamwe matanho.
Zvoga zviitiko zvekumhanya: Zvishandiso nenzira yehungwaru hwekunyepedzera zvinoshandiswa kudzikamisa zviitiko zvako pasati Instagram yavhara account yako. Izvo zvinozvitangazve otomatiki mushure.
VPN uye kugadzirisa: Iyo software inokutendera iwe kumisikidza proxy, uye zvichienderana nerudzi rwekupihwa, unogona kuwana anosvika gumi proxies.
Kuchengeteka: Vanoti vakachengetedzeka 100% nekuti chimwe nechimwe chezvavanopa chinosanganisira maproxies akazvitsaurira. Chii chimwe, data rako rakanyorwa uye iwe unowana rubatsiro kubva kune premium rutsigiro, iyo inomhanya chaizvo.
Zvakafanana bots: Jeffrey
Mutengo: 29.95 EUR pamwedzi
Zvoga zviitiko zvekumhanya: Hapana kutaurwa kwekumhanyisa kumisikidza zviitiko zvoga.
VPN uye kugadzirisa: Tarisira yega yega Instagram account kuti umhanye neayo wega HTTP proxy.
Kuchengeteka: Iyi bot yaive yakagadzirirwa kutevedzera zviitiko zvezuva nezuva zvemagariro pa Instagram kusvika kagumi nekukurumidza kupfuura munhu wepakati aigona kuzvipedzisa ivo pachavo. Iyo bot inogona kuve ine njodzi, sezvo ichishanda nguva dzose kwemaawa makumi maviri nemana zuva rega rega, uye vashandisi vanomhanyisa njodzi yekudzokorora zvakapfuura Instagram kubatanidzwa miganho.
Zvakafanana bots: Kukura
Zvoga zviitiko zvekumhanya:Instavast inoita kuti iwe ugadzirise kumhanya kwe otomatiki. Iyi ficha inogona kubatsira kana iwe uchida kudzikisira njodzi iyo Instagram ichakuona iwe.. Iwe une sarudzo pakati pe3 kumhanya kutanga nekunonoka, zvakajairika uye nekukurumidza. Iyo inokurudzirwa kumisikidzwa yekumhanya kwechiitiko chako kunofanirwa kuve “Nguva yeKutsanya” paunotanga kushandisa masevhisi avo.
VPN uye kugadzirisa: :
Yemunharaunda yakagadzirirwa proxy apps inogona kutorwa uye kuiswa pane yako nhare kana PC.
Kuchengeteka:Standard chengetedzo maficha, Zvisinei, ivo vanoti kukura kwavo sevhisi inoenderana zvizere nemitemo yebasa ye Instagram.
Zvakafanana bots: Nitreo
Mutengo: 95 EUR pamwedzi
Zvoga zviitiko zvekumhanya: Ivo vane marongero anodikanwa ekudzivirira account yako uye pawebhusaiti yavo zvinoti iyo bot inoenderana nemitemo yebasa ye Instagram.
VPN uye kugadzirisa: Iyo inopa yemahara proxy kutenga uye setup. Sisitimu yavo zvakare inotarisira kuitisa yako proxy chengetedzo iwe..
Kuchengeteka: Panyaya yekuchengetedza, Ektora inopa mhinduro yakasarudzika uye ine hungwaru yekuona kuti vashandisi vayo havaoni se spam kana kurambidzwa. Ose mashandisiro emabasa ari AI-based uye chikuva chinoshandisa kumeso kumeso uye inoteedzera yazvino vhezheni yeiyo Instagram mbozha app. Kukura kwavo sevhisi kunoenderana nehunhu hwevanhu maererano neiyo Instagram chiitiko, aya ndiwo maratidziro avanogona kuita vateereri vazere nevashandisi chaivo.
Zvakafanana bots: Growthsilo
Mubvunzo. CHII CHINONZI ZVAKANAKA INSTAGRAM BOT YEMAHARA
A. Kunze kwebhoti dzese dzatakawana, tinokurudzira Instagram Muteveri Bot nekuti inoshanda nekukurumidza kwazvo, kunyanya pahyper pro vhoti.
Mubvunzo. NDINOGONA SEI KUDZIVIRIRA YANGU Nhoroondo
A. Unogona kuchengetedza account yako uchishandisa proxy sevhisi. Nenzira iyi, yako IP kero inozochinja otomatiki.
Mubvunzo. NDEZVIPI MAGI BHOTI ANOGADZIRA KUNAKA
A. IBF neIngramer ndidzo dzakanakisa instagram bots yekuchengetedza. Unogona kuchengetedza account yako uchishandisa proxy sevhisi.
Mubvunzo. YANGU ACCOUNT ICHAVharwa
A. Izvo zvese zvinoenderana nemabatiro aunoita account yako uye kana uri kushandisa proxy..
Mubvunzo. PANE MABHOTI PAINSTAGRAM?
A. Mazhinji ma bots e Instagram akafanana otomatiki uye anotevera, zvinoenderana neumwe neumwe bot.
Mubvunzo. IYO INSTAGRAM BOTS DZEMutemo?
A. Masocial media makambani anogona kuunyana pane mamwe bots, zvinoenderana nezvinoitwa nebhoti yega yega. Kunyangwe zvisiri pamutemo.
Mubvunzo. PANO PANE INSTAGRAM BOTS ANOSHANDA?
A. Mazhinji bots ane mhedzisiro yakanaka, kunyanya IBF neIngramer.
Mubvunzo. ITA INSTAGRAM BOTS ACHIRI KUSHANDA MUNA 2020?
A. Mamwe bots akamira kushanda, uye mamwe mabasa anogona kunge asisiri kushanda. Zvisinei, mazhinji emabhoti mune runyorwa pamusoro anoshanda zvakakwana.
Mubvunzo. IYO INSTAGRAM BOTS INOKOSHA IYO??
A. Ehe, unogona kuwana vateveri chaivo nekukurumidza nekukurumidza zvichienderana neniche yako.
Tsvaga azvino otomatiki ekuita chaiko pa InstagramMaitiro ekuwedzera nyaya pa Instagram
Tsvaga azvino otomatiki ekuita chaiko pa InstagramIyo Yakanakisa TikTok Bots paMusika uye Maitiro ekudzivirira Akaunti Yako